OYSU oo ka qayb galaysa Shir Qaramada Midoobay uga furmi doona Geneva. | ogaden24
OYSU oo ka qayb galaysa Shir Qaramada Midoobay uga furmi doona Geneva.
Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Soomaalida Ogadeniya ee OYSU waxuu ka qayb galayaa kulamada Qaramada Midoobay ee looga hadlayo arrimaha dadyowga laga tirada badan yahay. Kulankan oo ka dhacaya Geneva dalka Switzerland waxaa sanadkan diirada lagu saaraya wadan la’aanta taas oo ah xaalad la xidhiidha xuquuqda aadanaha oo saamayn xoogayn ku yeelatay dad yowga laga tirada badan yahay ee Aduunka ku nool.
Kulankan waxaa looga hadli doona arrimaha la xidhiidhaa sidii looga hortagi lahaa xad gudubyada xuquuqda aadamaha islamarkaasna sidii loo tixgalin lahaa arrimaha xuquuqul insaanka ee saamaynta ku leh shaqsiga kasoo jeeda Qaran ama beel, diin iyo luqad (af) kuwa laga tirada badanyahay iyo kuwa wadan laanta ah.
OYSU waxaa kale oo ay ka qayb qaadan doonaan kulan kale oo barbar socda madashan sanadkan looga hadlayo arrimaha la xidhiidha dad yawga laga tirada badan yahay, Kulankan labaad ee barbarsocda waxaa soo aggaasimay UNPO, waxana looga hadlaya sidii looga hortagi lahaa arrimaha la xidhiidha wadan laanta islamarkaasna loo kobicin lahaa awoodsiinta dadyowga laga tirada badanyahay.